अयोग्य छन, धनगढीका अधिकाशं मासु पसल – Medianp
अयोग्य छन, धनगढीका अधिकाशं मासु पसल
MediaNP NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०२, २०७५१२:२०0
कैलाली २ जेठ । धनगढीका मासुपसलमा स्वास्थ्यका लागि अयोग्य मासु बिक्री भइरहेको पाइएको छ। मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा भएको अनुगमनका क्रममा अधिकांश मासु पसलमा बासी र गन्हाएको मासु बिक्री गरेको पाइएको हो । धनगढी हसनपुरमा रहेका सोल्तानी मासु पसलमा बासी गनाएको मासु बिक्री गरिरहेको भेटियो ।
अनुुगमन टोलीले राष्ट्र बैंक नजिक रहेको इस्माइल मासुपसल, सब्जी मण्डीमा रहेका मण्डल मासुपसल, एस सोम मासु पसल र चटकपुरमा रहेको थापा मासुपसललगायत दर्जन मासुपसलमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमन गरेको कुनै पनि पसलमा सन्तोषजनक नभेटिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पशु चिकित्सक केशवदत्त जोशीले बताए। स्वच्छ मासु खान सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने पशु चिकित्सकको सुझाव छ। अनुगमन गरेको मासुपसलमा कसैले पनि सरसफाइमा ध्यान नदिएको र मासु पसलको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका पसललाई सरसफाइमा ध्यान दिन अनुगमन टिमले निर्देशन दिएको छ।
मासु ऐन २०५५ बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ग्राहक स्वास्थ्यका लागि अयोग्य मासु खान बाध्य भएका छन्। मुलुक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आएपछि यस्ता विकृति कम हुने अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। उपमहानगरपालिकाले अनुगमनमा आफै सहभागि हुनुपर्ने भए पनि एउटा सुरक्षा कर्मी पठाएर काम काट्ने काम गरेको पोल्टी तथा माछा मासु व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष जिजेन्द्र यादवको गुनासो छ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको एक्लाएक्लै वार्ता सकियो, के भयो सहमति ?
अक्ल बिनाको नक्ल, हाँसो रोक्न नसकिने तस्विरहरु !
किन काठमाण्डूको विमानस्थलमा भइरहेको छ धेरै परिमाणमा मदिरा जफत